RDJ 15 taona: nampifaly ny mpihaino sy ny mpankafy ry AmbondronA | NewsMada
RDJ 15 taona: nampifaly ny mpihaino sy ny mpankafy ry AmbondronA
Rehefa tonga ny tsingerintaona, matetika, mizara ny mamy sy ny fifaliana ho an’ny tia azy ny tompon-danonana. Toy izany koa ny nataon’ny onjampeo RDJ amin’izao fankalazana ny faha-15 taona ijoroany izao. Faly tokoa ny mpihaino satria ny tiany indrindra, ny tarika AmbondronA, no nomena nankafiziny.
Andro nifamotoan’ny mpankafy RDJ sy ny mpanaraka ny tarika AmbondronA na koa ireo roa ireo mihitsy ny omaly, tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. Tsy vitsy ireo tonga namaly ny antso, araka ny efa fantatra mialoha, satria lany tanteraka ny tapakila na mbola tsy tonga aza ilay andron’ny fampisehoana.
Tafaray tokoa ny tia sy ny manina, toy ny fihaonan’ny tarika amin’ny mpankafy azy hatramin’izay, satria horakoraka hatrany ny an’ny mpankafy, toa efa niandry fatratra ity fotoana ity. Tsy latsa-danja amin’ny niainana hatramin’izay ny fifamatorana eo amin-dry Kix sy ny ekipany ary ny mpankafy, izay hita ho feno fifaliana tanteraka, nanaraka tsy an-kiato ireo rehetra nentina an-tsehatra.
Nisy ny tsy fahatomombanan’ny fanamafisam-peo, indrindra tamin’ny fiandohan’ny fampisehoana, sy ny sampona teknika, izay nampiato ny hetsika, nandritra ny minitra vitsivitsy. Na izany aza, tsy nanamaloka ny fiarahana izany ary notsenain’ny mpijery tamin’ny horakoraka hatrany ny fiverenan’ny seho tamin’ny laoniny.
Anisan’ny nankasitrahan’ny maro manokana, omaly, ny nitondrana an-tsehatra indray ireo hiran’ny tarika AmbondronA, nampalaza azy, tany am-piandohany tany.